Tofoka Amin’Ilay ‘Fomba Fisainana: Isika VS Izy Ireo’— Samy Trinidadiana Daholo Isika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2015 17:45 GMT
Sarin'i Lily Kwok Shinoa-Trinidadiana, nalefasany ho an'ny daholobe tamin'ny Facebook, mba hiadiana amin'ny fomba fanao fitsaratsaràm-poana noho ny fiaviana.
Mahasarika fijery maro ny antsojay ety amin'ny Aterineto ataon'ny olom-pirenena ao Trinite sy Tobago amin'ireo taranaka Shinoa nandritra ny nisian'ny onjanà fitsaratsaram-poana farany indrindra teo noho ny fihaviana natao azy ireo. Nirehitra ny tsy fitiavana Shinoa naterak'ilay lahatsarinà mpivady iray — izay nolazaina fa tao aminà toeram-pisakafoana Shinoa iray — manala hoditra alika. Lasa nalaza be tamin'ny media sosialy io ary vao mainka nihombo vokatr'ireo fanehoankevitra nampihitatra ny fery nataon'ny ministeran'ny fahasalaman'ny firenena.
“Vehivavy Chinee” iray (araka ny fiantso azy ireo matetika any Trinidad), Lily Kwok, tsy nahavita nizaka izany intsony, ary nandefa ny sarin'ny tenany tamin'ny Facebook, mitazona takelaka mivaky toy izao, ” Tsy ‘Hiverina any Shina aho’. Trinidadiana aho.” Notohanan'ireo olom-pirenena mitovy fomba fisainana aminy avy hatrany izy, taranaka Shinoa ny sasany, ny sasany tsy izany.
Nanintona an'ilay mpitoraka bilaogy Rhoda Bharath ny fahasahiany sy ny fivantanany miteny, ka nanao tafatafa tamin'i Kwok izy momba ny fiainany hatrizay ny maha-Shinoa miaina any Trinite sy Tobago azy. Nampiditra ilay lahatsoratra tamin'ny famintinana i Bharath hoe “manana ray aman-dreny Shinoa, fomba fisainana mahafinaritra ary fanahy torotoro i Kwok. Mahatsapa ho zara raha misy mpisolo tena izy, tsy misy mampahery ary trotraka”. Ny tena zava-misy, tsy voalohany tamin'ny zavatra nampirohotra ny fihetseham-po tsy tia Shinoa ilay tranga famotsirana alika iny. Nampahatsiahy i Kwok:
Nanomboka voalohany io tamin'ny tranga ratsinà olom-pirenena Shinoa 4 tafiditra tamin'ny fangalarana atodin-tsokatra, ny volana Jona 2015. Ketraka tanteraka aho […] Amin'ny maha olona tia biby sy tia mijery sokatra ahy, tezitra mafy tamin'ilay toe-javatra aho. Fa fantatrao ve hoe inona ihany koa no tena mahatezitra ahy? Ireo fanehoankevitra manavakavaka fiaviana nanaraka izany tao amin'ny media sosialy. Tsy misy fisalasalàna tao an-tsaiko hoe heloka bevava ny zavatra nataon'ireo lehilahy ireo, ary tokony handray ny vokany avy amin'ny lalàna arak'izany izy ireo. Kanefa, raha toa ka tokony nifantoka tamin'ny naha heloka bevava ilay hetsika fotsiny […] maro ireo fanehoankevitra no nihodina tany amin'ny fitsaratsaram-poana mifandray amin'ny fiaviana; nametraka hoe ‘mihinana ny zavatra rehetra ny vahoaka Chinee’. Ankoatra izay, tena lasa lavitra loatra ireo fanehoankevitra sasany ka nangataka hoe ‘tokony alefa mody ireo “dem” Chinee rehetra.’ Hitako ho mahatsikaiky izany raha jerena hoe rehefa mipoitra amin'ny media sosialy ireo sarin'ny olona mitsangana eo ambonin'ireo soka-dranomasina “luth”, zara raha (na hoe tsy misy mihitsy) ireo olona mampifandray ny ‘fiaviana’ rehefa miresaka ilay zavatra nitranga.
Mikasika ilay zava-nitranga nahatsiravina famotsirana alika, nilaza izao izy:
Tsy lavin'ny olona fa novotsirina ilay alika tao omin'ilay lahatsary. Zava-nitranga mihitsy izany. Ary eny, mbola tafiditra tamin'ny zavatra toy izany indray ireo teratany Shinoa. Zava-nisy indrindra izany. Fa fantatrao ve hoe inona no tsy zava-nisy? Ny hoe tsy nifandray tamin'ny toeram-pisakafoana Shinoa mihitsy ny fikarakaràna ilay alika mba hohanina, ny hoe entina ampiasaina hanoloana hena hafa any amin'ireo toeram-pisakafoanana Shinoa ilay hena alika, sy ny hoe vahoaka Shinoa REHETRA sy ireo olona rehetra taranaka Shinoa dia mihinana alika. Kanefa, na zava-nisy tsy sarotra aza, sy notohanana ara-potokevitra aza ireny, maro ireo olona nanao fanehoankevitra tena feno fanavakavahana sy tsy fitiavana ny hafa nanodidina azy ireo […]
Raha toa ka tokony hifantoka amin'ny tena olana eo an-tànana, izay tokony hanaovana adihevitra mampivoatra momba ny zon'ireo biby sy ny fiarovana azy any Trinite sy Tobago, lasa nihoa-pefy isika amin'ny fampiasàna ilay zava-niseho ho sehatra fanararaotana fanaovana fanavakavahana mafy amin'ireo olona Shinoa sy ireo olona taranaka Shinoa.
Tamin'ny fanamarihana fa mampidi-doza ny fanarahana sy ny fanekena an-jambany ny fihetsehampon'olon-kafa momba ireny karazana olana ireny, nilaza i Kwok fa miatrika io karazana fanavakavaham-pihaviana io “amin'ny alalan'ny fampianarana” izy:
Indraindray, mila ampahatsiahivinao ny olona ny maha-olona anao sy ny maha-ianao anao manokana. […] Mba hambolena ny firaisankina, ny filaminana sy ny fitiavana ao anatin'ny fiarahamonintsika, tsy maintsy isika aloha no manomboka maneho fitiavana.
Telo taona lasa izay, tamin'ny fotoanan'ny tsingerintaona faha-50 ny fahaleovantenan'i Trinite sy Tobago tamin'ny Grande Bretagne, nandefa tetikasa an-tsary tamin'ny Aterineto i Joshua Lue Chee Kong, izay nampiseho ny halalin'ny fomba fijery ara-piaviana ao Trinite sy Tobago. Nozarainy ho “ampahany” efatra ilay tetikasa — Volontany, Fotsy, Mavo ary Mainty — ary napetraka, ho toy ny olona Shinoa, tamin'ireo karazana zava-naseho miaro fitsaratsaràm-poana izay nahatonga ireo hivandravandra tonga dia hita, na tsy ho asian-teny aza, hoe tsy misy fotony mihitsy ireny fomba fisainana ireny. Ireo Ampahany Volontany dia filalaovana ny tantaran'ny mpiasa Indiana izay tonga tao Trinite sy Tobago mba hiasa ao amin'ny tanim-pary taorian'ny Famotsorana:
Sary avy tamin'i Keevan Chang On. Nahazoana alalana ny fampiasàna azy
Ilay Ampahany Fotsy kosa nalaina tamin'ireo Trinidadiana mazava hoditra avy nahazo toerana ambony sy tsy misy ahiahy:
Ilay Ampahany Mavo tena saika mampaminany, satria mampiseho sary maro an'i Lue Chee Kong ao aminà lakozia miaraka amin'ny “hena alika” maro:
Farany, ilay Ampahany Mainty mampiseho an'i Lue Chee Kong eo amin'ny sampanan-dàlana, vonona ny hanadio ireo fitaratra fiara :
Mahagaga fa misy elanelany taona maro ireto lahatsoratra roa ireto; mety nanao fanehoankevitra tamin'ireo sarin'i Joshua Lue Chee Kong i Lily Kwok raha nilaza hoe:
Ianao, amin'ny maha olona ao amin'ny ‘firenena “callaloo” anao […], tsy manana zo ny hanala baràka na hanambany ny olona hafa miainga avy amin'ny ‘satany’ ao anatin'ny firenena. Efa somary antitra ihany ho an'izao taona 2015 izao io fomba fisainana ‘isika’ manohitra ‘azy ireo’ io, izay nifandimbiasana teo hatry ny nisian'ny fanjanahantany.